တိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြွင်းမဲ့အာဏာအပျနှံရန်လိုအပ်ပါသည် - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
Rennie Chamasanyan နှင့်အတူအင်တာဗျူး
ပုံရိပ်တွေ: Rennie Chamasanyan
Rennie Chamasanyaဎနီးပါး 14 နှစ်ပေါင်းလန်ဒန်တှငျနထေိုငျခဲ့သညျ။ တိုင်းအစပိုင်းခက်ခဲသည်အတိုင်း, Rennie ရဲ့အဖြစ်ကောင်းစွာလွယ်ကူသောတဦးတည်းမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်သူမအမြဲသူမအောင်မြင်မယ်လို့သိထားတယ်။ ခုနစ်နှစ်များအတွက်သူမကဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့တီဗီမှာဘဏ္ဍာရေးညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်လေးနှစ်သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပဏီရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမ၏အကြီးစိတ်အားထက်သန်ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အဘယျသို့သူမ၏အလွန်အမင်းပျော်ရွှင်စေသည်သူမ၏ခင်ပွန်း Hovanes နှင့်၎င်းတို့၏တဦးတည်းနှစ်အရွယ်သား Georgi, သူမ၏မိသားစုသည်။
ကြှနျတေျာ့ရဲ့အစမှာ အင်္ဂလန်မှာအသက်တာသစ် ငါသုံးခုသောနေရာများမှာအလုပ်လုပ်နှင့်ငါ၏ဥပဒေကြမ်းများနှင့်ငှားရန်ဆပ်ဖို့ပိုက်ဆံရှိသည်ဖို့သုံးလေးနာရီခန့်တညဉ့်အဘို့အိပ်ပျော်ခဲ့သည်။ ငါနီးပါးတစ်နှစ်အကြာတွင်အိမ်တအိမ်ဝယ်လိုက်တယ်။
ငါမှပြောင်းရွှေ့ လန်ဒန် နှင့်အလုပ်အကိုင်အရှာနေတော့တာပဲ။ ငါလန်ဒန်၏ဗဟို၌ငါ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်နဲ့ကျွန်မနီးပါးကိုလန်ဒန်ပြင်ပမှာအလုပ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ နေ့တိုင်းငါတစ်နာရီနှင့်တစ်နှစ်ခွဲဘို့ခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ လူတိုင်းအလုပ်လုပ်ဗဟိုမှစွန်ကနေလာမယ့်ခဲ့သည်နေစဉ်, ငါဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်နေခဲ့ပါတယ် ... ဒါပေမယ့်ငါနောက်ကျခြင်းနှင့်ငါလမ်းပေါ်မှာလှဲနေသောကြောင့် ... တစ်ဦးကဘတ်စ်ကားနီးပါးငါ့ကိုကျော်ပွေးရုံတစ်မီတာကွာငါ့ထံမှရပ်တန့်ငါအပြေးခဲ့သည်တဦးတည်းနံနက် ငါကအနီရောင်အလင်းပေါ်ဖြတ်ကျော်လို့ပဲ။ ငါဒါကြောက်တယ်ခဲ့ငါသည်ဤငါသည်ကိုယ်မှဤအမှုကိုနှင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးသောကာလခဲ့ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါစုတ်ဘောင်းဘီနှင့်အတူရုံးခန်းသို့ သွား. ငါပြုခံခဲ့ရသည်သူတို့ကိုသို့ပြောသည်။ ထိုအခါငါလမ်းလျှောက်အကွာအဝေးအတွင်းတစ်ဦးကိုအလုပ်ရှာမည်ဟုဆိုပိုပြီးသွားလာရန်မလိုအပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်ကျွန်မရုပ်မြင်သံကြားမှာအင်တာဗျူးဖို့နဲ့သူတို့သညျငါ့ကိုကြိုက်တယ်ငါ၏မဟာပျော်ရွှင်မှုကိုထံသို့သွားလေ၏။ ကိုယ့်ဆယ်မိနစ်များအတွက်ရုံးလမ်းလျှောက်ခဲ့ရတယ်!
ရုပ်မြင်သံကြားအတွက်အလုပ်ဖြစ်ကောင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖြည့်ဆည်းဖို့ဆန္ဒနှင့်အတူတိုင်းလူတစ်ဦး၏အိပ်မက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတစျခုလုံးကိုရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ပြည်ပမှာရုံးများအတွက်ဘဏ္ဍာရေးဒါရိုက်တာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဘရာဇီး, ယူကရိန်း, ပြင်သစ်မှခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ငါလက်ထောက်အနေနဲ့ရုံးခန်းတစ်ခုဒရိုင်ဘာ, စီးပွားရေးခရီးစဉ်ကုန်ကျစရိတ်ခဲ့ပေမယ့်ငါ့အလိုရှိသမျှစကားလုံးအထက်အလေးချိန်ခဲ့ရပြီးလူတွေငါ့ကိုအများကြီးလေးစား။ ကျွန်မသင်တန်း၏များစွာသောအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မအများကြီးသင်ယူနှင့်ယခုနေ့တိုင်းငါ့ကိုကူညီပေးသည်။ ကျွန်မသိသနှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုပြုနိုင်မည်သာပိုင်ရှင်တွေငါ့ကိုအထက်တွင်ကြောင့်နှစ်ပေါင်းနောက်မှငါထွက်လာခဲ့တယ်။ ငါသည်ငါ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့လမ်းအတွက်ငါ့အချိန်ကိုအသုံးပြုရန်လိုချင်ချင်ခဲ့ပါဘူး။
တိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုအကြွင်းမဲ့အာဏာအပျနှံလိုအပ်သည်။ ဒါဟာသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပါလိမ့်မယ်ငွေဘယ်လောက်ဒီတော့အရေးမပါပေမယ်ဘယ်လောက်အားထုတ်မှုနဲ့သင်ရှိသည်အလိုရှိကြသည်။ ကြလိမ့်မည်ကိုရည်မှန်းချက်ကြီး ... ငါသည်ဤမြို့တော်ထက်ပိုမိုအရေးကြီးလှသည်ထင်ပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့တိပ်အတိုင်းအတာနှင့်အတူ - ငါဟောင်း Laptop နဲ့ဆောက်လုပ်ရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ငါ့ဘဏ္ဍာရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့သည်။
စာရင်းကိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငါတကယ်အတူသက်သာခံစားရကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးကြီးမားသည်မဟုတ်, လူတိုင်းအတွက်အလွန်မြင့်အဆင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများနှင့်အတူဆကျဆံသူတစ်ဦးရှေ့နေရှိသည်။ အကြှနျုပျ၏ clients များငါ့ကိုအပြည့်အဝယုံကြည်မှုရှိသည် - ငါလူတစ်ဦးအတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဘယ်တော့မှင့်ငါးနှစ်ကြာ clients များရှိခဲ့ပါပြီ။ ငါအွန်လိုင်းနှင့်မေးလ်များကအရာရာတိုင်းကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ ကျွန်မအင်္ဂလန်၏ဥပဒေများလေးစားခြင်းနှင့်ငါအထိရောက်ဆုံးထုံးစံရှိလူများအကြံပေးထင်ပါတယ်။
အောင်မြင်မှုအဘို့အကြှနျုပျ၏ပုံသေနည်းအလုပ်, အခွအေနမြေား၏ကောင်းသောအကဲဖြတ်, သင်စိတ်အားသူကိုတစ်စုံတစ်ဦးကများကလိုက်ပါသွားခံရဖို့အထူးသဖြင့်အခြေအနေများ, အန္တရာယ်များနှင့်များ၏စိစစ်အများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျပျော်ရွှင်စေပါဘူးသူတစ်ဦးနှင့်အတူဖြစ်ခြင်းထက်ပိုမိုကြီးကျယ်သောအရာမရှိ။ ဒါကပုဂ္ဂိုလ်ရေးမဟုတ်သလိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဟုတ်, သင့်အောင်မြင်မှုအဘို့ကောင်းသောမဖြစ်နိုင်ပါ။ သငျသညျအနားမှာလူတစ်ဦးကယ့်ကို ... အလွန်အရေးကြီးပါသည်ပါ! ဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုသငျသညျ, ချစ်ရသူတန်ဖိုးနဲ့အစားထိုးလို့မရတဲ့ခံစားမိစေရန်, သင်ကလိုအပ်သည့်အခါသင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုဖြစ်သင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်အကောင်းဆုံးကိုပေးစေသင့်ပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း startup, လန်ဒန်, လူ, Rennie Chamasanyan, startup | 22-02-2017 | rating:5/ 30